Ahoana ny fomba handaminana TP-LINK Extender | Fikolokoloana biolo
2 Ampifanaraho ny TP-LINK Extender
3 Dingana tokony hamboarina ny TP-LINK Extender amin'ny alàlan'ny WPS sy Range Extender
4 Dingana tokony hamboarina TP-LINK Extender amin'ny alàlan'ny tranokala mpitety tranonkala
5 TP-LINK Toerana misy ny fitaovana extender
Raha manana ny fitaovana TP-LINK Extender ianao ary tsy hainao ny manamboatra azy dia eo amin'ny toerana mety ianao, satria eto no hahitanao ny dingana arahinao hahatratrarana azy. Rehefa manana toerana ao an-tranonao na any amin'ny birao misy ny famantarana ianao Internet tsy misy tariby na mahantra na maty dia mila manangana ity fitaovana ity ianao.
Mazava ho azy fa saika intuitive ny fametrahana an'io fitaovana io, saingy misy fotoana tsy iasany araka ny antenaina noho ny fikirana diso. Izany dia miteraka fifandraisana Internet ratsy na tanjaka famantarana ambany izay tsy mamela fifandraisana tsara.
Raha izany no anao, amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny fampahalalana miavaka indrindra momba ity fitaovana ity hanitarana ny signal tsy misy tariby ny modem anao. Mba hainao tsara ny fomba fanovana TP-LINK Extender.
Ny fitaovana TP-LINK Extender dia a Famerenana signal WiFi ary ny asany lehibe indrindra dia ny fanitarana ny signal an'ny router tsy misy tariby. Ity mba hananana signal Internet amin'ny toerana izay tsy nahatratra ny WiFi na ambany dia ambany ny signal.
Androany, ity booster signal tsy misy tariby ity dia iray amin'ireo lamaody sy malaza indrindra eo amin'ny tsenan'ny teknolojia. Izy io koa dia manana famolavolana be pitsiny mba hampiavaka azy sy ho tsara tarehy na aiza na aiza apetranao. Ankoatr'izay, manana bokotra voahodidin'ny jiro izy mba hampandrenesana ireo masontsivana samihafa momba ny fifandraisana Internet.
Tombony iray hafa amin'ny fananana fitaovana TP-LINK Extender ny tena mora apetraka ary noho ny haitao tsy misy tariby dia tsy mampiasa tariby manelingelina avela mihantona izy io. Hatramin'izay, manana endrika kely izy izay miditra ao amin'ny outlet rehetra ary tsy mitaky habaka firy.
Ho an'ireo mpampiasa izay maniry fifandraisana misy tariby, ity fitaovana ity dia miaraka amin'ny seranana Ethernet kely. Azonao atao koa ny mampifandray laptop na fitaovana mora ampiasaina amin'ny tariby tambajotra RJ45.
Ity fitaovana WiFi ity dia manana faritra tsara sy afaka mahatratra hatramin'ny 100 metatra toradroa amin'ny toerana malalaka. Ity dia iray amin'ireo manintona lehibe an'ity antena mpamaky signal tsy misy tariby ity.
Araka ny efa hitanao, tsy misy fitaovana tsara kokoa hanitatra ny fandrakofana ny fifandraisanao WiFi noho ny TP-LINK Extender. Amin'ity fitaovana ity dia tsy hanana faritra maty intsony ianao raha tsy misy WiFi ary tsy hanana famantarana ambany koa ianao izay mahatonga ny fifandraisana tsy ho vitanao.
Ankehitriny rehefa fantatrao tsara ity fampiroboroboana signal WiFi ity, fotoana izao hianaranao ny fomba handefasana azy. Ao amin'ny fizarana manaraka amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao izay rehetra hataonao ho an'ny ekipanao TP-LINK configure.
Ampifanaraho ny TP-LINK Extender
Ity fitaovana WiFi ity dia mora be ny manamboatra azy noho ny fikirakira fametrahana haingana ka ao anatin'ny minitra vitsy dia efa mifandray ianao. Raha ny marina dia misy fomba 2 hanamboarana ny fitaovana TP-LINK Extender misy anao mba hahafahanao misafidy izay mety aminao indrindra.
Ny voalohany dia amin'ny alàlan'ny Bokotra WPS, ity teknolojia ity dia manokatra seranan-tsambo azo antoka ho an'ny fitaovanao. Androany, ny ankamaroan'ny router tsy misy tariby izy ireo dia manana an'ity bokotra fifandraisana WPS ity. Saingy, satria mbola misy maodely marobe modem WiFi tsy manana an'ity haitao ity, dia misy fomba hafa hananganana fifandraisana.
Ny safidy faharoa azo ampiasaina hanamboarana ny fitaovana TP-LINK dia ny fampiasana ny solosaina na solosaina findainy mampiasa ny pejin'izy ireo hitantanana ilay fitaovana. Tsotra ihany koa ity safidy ity, na dia azo antoka aza fa mila asa bebe kokoa noho ny fampiasana ny bokotra WPS mandeha ho azy.
Avy eo, ho hitanao ny dingana tokony hataonao handrindrana ny fitaovana TP-LINK Extender WiFi anao amin'ny fomba 2 misy.
Dingana tokony hamboarina ny TP-LINK Extender amin'ny alàlan'ny WPS sy Range Extender
Alohan'ny hanombohana ny fikirakirana ny fitaovana fanitarana signal tsy misy tariby dia ilaina ny manamarina raha manana ny bokotra WPS ny router WiFi anao. Raha hitanao io bokotra fifandraisana mandeha ho azy io dia azonao atao ny manomboka manatanteraka ireto dingana manaraka ireto mankany TP-LINK configure:
Ampidiro araka izay azo atao ny router TP-LINK Extender anao amin'ny router WiFi mandra-pahavitanao ny fizotran'ny fikirakira.
Tsindrio mandritra ny 15 segondra ny bokotra "Reset" izay hita eo ambanin'ny fitaovana.
Miandrasa mandra-pahatongan'ny fitaovana hanitarana ny fambara WiFi dia haverina tanteraka ary tsindrio ary tazomy ny bokotra WPS amin'ny router.
Afaho ny bokotra WPS amin'ny router aorian'ny fiparitahan'ny jiro famantarana.
Avy hatrany, tsindrio ny bokotra "Range extender”Ao amin'ny fitaovana TP-LINK Extender ary tazomy mandritra ny 3 segondra na mandra-pahazavana ny jiro famantarana ny fifandraisana.
Vantany vao tafavoaka soa aman-tsara ny fitaovana dia esory ny fitaovana TP-LINK Extender anao ary apetraho amin'ny toerana tadiavinao.
Amin'ny faran'ireto dingana ireto dia ho vonona hanitatra ny famantarana ny fitaovanao. Ataovy ao an-tsaina ny fametrahana azy amin'ny toerana tsara hahafahany mifandray tanteraka amin'ny router WiFi.
Ankehitriny, raha tsy manana ny bokotra WPS ny router tsy misy taribyo, ao amin'ny fizarana manaraka dia ho hitanao ireo dingana handrindrana ny TP-LINK Extender nefa tsy mampiasa teknolojia WPS.
Dingana tokony hamboarina TP-LINK Extender amin'ny alàlan'ny tranokala mpitety tranonkala
Ny fikirakirana ny fitaovanao hanitarana ny signal WiFi dia azo atao amin'ny PC amin'ny alàlan'ny fifandraisana misy tariby. Toy izany koa, azonao atao ity fomba ity amin'ny alàlan'ny fampifandraisana an-tariby ny findainao an-telefaona miaraka amin'ny fitaovana TP-LINK Extender.
Ataovy ao an-tsaina fa, raha hanamboatra ny fitaovana famerenanana WiFi amin'ny alàlan'ny PC ianao dia tsy maintsy manana tariby tambajotra. Ilaina ilaina ny tariby tambajotra hampifandray ny fitaovana TP-LINK Extender amin'ny seranan-tserasera amin'ny solosaina.
Raha efa manana izay ilaina amin'ny fikirakirana TP-LINK amin'ny alàlan'ny solosaina ianao dia araho ny dingana hitanao:
Ampidiro ao amin'ny outlet akaiky ny solosainao ny fitaovanao TP-LINK.
Ankehitriny, ampidiro ao amin'ny port internet an'ny solosaina ny tariby tambajotra ary ny faran'ny iray mankany amin'ny port internet an'ny fitaovana. Raha te hanao izany amin'ny findainao ianao dia mifandraisa amin'ny tambajotra WiFi misy ilay fitaovana izay manana anarana "TP-LINK Extender".
Sokafy ny tranokala safidinao ary amin'ny bara fikarohana dia ampidiro ny "http://tplinkrepeater.net" na "192.168.0.254" ary kitiho ny "Enter".
Avy hatrany dia hisokatra ny varavarankelin'ny mpandrindra fitaovana, izay hampidiranao ny "Admin" ho solonanarana sy tenimiafinao ary safidinao ny "Login".
Avy eo, hiditra ny interface config izay hanolorany ireo tambajotra WiFi misy, safidio ny tamba-jotra an-trano.
Avy eo, hampiditra ny teny miafinao ho an'ny WiFi an-trano ianao ary tsindrio ny bokotra "Manaraka".
Ampidiro ny anarana tadiavinao ho an'ny tambajotra WiFi mitatra mamorona ianao ary mifidy "Manaraka".
Ary farany, ho hitanao eo amin'ny efijery ny fikirakirana farany an'ny tambajotra ary kitiho ny bokotra "Vonjeo".
Avy eo, azonao atao ny mampifandray ny fitaovana TP-LINK Extender anao amin'ny PC ary apetrakao amin'izay tianao.
TP-LINK Toerana misy ny fitaovana extender
Raha vantany vao namboarinao ny fitaovana ampiasainao manitatra ny signal WiFi amin'ny router anao dia tsy maintsy fantatrao hoe aiza no misy azy. Mba hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ity fitaovana ity ary hahatratra fantsom-pamantarana lehibe kokoa ao an-tranonao na any amin'ny birao.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny fitaovanao TP-LINK Extender hahafahanao mamorona izay toerana mety hametrahana azy. Eo amin'ny faritra anoloana eo amin'ilay fitaovana dia hahita bokotra misy fefy manga misy jiro famantarana ianao. Manodidina ny bokotra dia ho hitanao ireo marika manondro ny karazana fifandraisana, ny tanjaka sy ny hery famantarana.
Ny marina, ny antsasaky ny jiro dia mifandraika amin'ny hamafin'ny fambara ary mitarika azy manoloana ny fanjaitra amin'ny famantaranandro. Mba hahafahanao mametraka ny fitaovana famerenana WiFi dia tsy maintsy tarihin'ny herin'ny signal ianao. Ny tanjaky ny signal WiFi marina ho an'ny fampisehoana tsara indrindra dia ny jiro famantarana 3.
Raha mampifandray ny fitaovanao ianao ary mijanona ihany ny jiro famantarana famantarana 2 dia midika izany fa mila manakaiky kokoa ny loharano niavian'ny loharano ianao (The router). Mifanohitra amin'izany, raha mampifandray azy ny jiro famantarana famantarana 5 WiFi, azonao atao ny mampiditra azy io mandrapahazoanao jiro famantarana 3 ary hanarona lavitra kokoa.
Araka ny hitanao, ampifanaraho TP-LINK Extender Tsotra be raha manaraka ny dingana hitanao amin'ity lahatsoratra ity ianao. Ho fanampin'izay, ho an'ny fampisehoana tsaratsara kokoa dia nianaranao koa ny fomba hijerena tsara ity fitaovana ity.
Raha tianao ity lahatsoratra ity momba ny fitaovanao TP-LINK hapetraka, aza atsahatra ny fanarahana ny bilaoginay. Ho fanampin'izay, ao amin'ny www.mantenimientobios.com misy lohahevitra teknolojia isan-karazany azonao atao.
Previous: Previous post: Mamoha karatra SD voaro voaaro
Next: Next post: Ahoana ny fanavaozana ny sarintany TomTom maimaim-poana